PE Hollow Grid Sheet Production-dalana - China Qingdao JBD milina
Plastic Board Production-dalana,
Plastic Sodina Production-dalana,
Plastic Profile Production-dalana,
Plastic Sheet Production-dalana,
Mono Na Multi Layer Sheet Production-dalana,
Mafy orina sy mangarahara Sheet Production-dalana,
PE Hollow Grid Sheet Production-dalana,
Mini mba Quantity: 1 SET
Endri-javatra: Amboary ny hevitry ny lamaody, kanto sy tony
Fanaterana ny fotoana: Mitoera ny fifanarahana
PE Hollow taratasy mombamomba fampirantiana tena fahazavana avo transmittance. Ity vokatra no mahatohitra ny toetr'andro, afo, fiantraikany, ary maivana ny lanjany, insulates hafanana, ary mahatohitra ny taratra UV. Ny sasany amin'ireo fangatahana maro ahitana fahazavana fonony, greenhouses, Decor anatiny, feo proofing kobany sy ny peta-drindrina ny dokam-barotra.
PE Hollow taratasy mombamomba azy dia maivana, fiantraikany sy ny diloilo mahatohitra, sy tantera-drano. Applications ahitana fonosana kaontenera, fampisehoana tontonana, isan'andro fampiasana zavatra, avoaky, ary miaro fonosana ho an'ny fitaovam-panorenana. PP azo namorona miakatra amin'izay endrika sy ny karazana vokatra toy ny turnover vata, singa boaty plastika sy ny partitions. Izany no zavatra tsara be mpampiasa noho ny fiarovana elektronika faritra.
Main Technical famaritana
Extruder famaritana SJ120 SJ100
Products Width 2100mm 1220mm
Products hateviny 2-8mm 2-8mm
Main Motor Power 132kw 110kw
Fahafahana (Max.) 350kg / h 200kg / h
Extruder famaritana SJ120, SJ45 SJ100, SJ45
Products hateviny 4-40mm 4-40mm
Main Motor Power 185kw / 22kw 132kw / 22kw
Fahafahana (Max.) 450kg / h 300kg / h
Qingdao Jinbei milina Co., Ltd. dia feno orinasa fampidirana fikarohana siantifika sy ny fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, teknolojia fanavaozana (fifampidinihana), famokarana sy ny fivarotana. Tsy nifidy fampandrosoana ny "hitsangana ny kalitao, hanana ny teknolojia, fanao aloha" hatrizay nanaovana ny orinasa. Ny orinasa locates amin'ny tanàna tsara tarehy Qingdao, mety tsara tarehy ny fifamoivoizana sy ny toerana tsara tarehy maka tombony fampandrosoana antsika. Noho ny fanohanana maro be mpanjifa sy ny namana, ny orinasa dia hampivelatra haingana, ary efa namorona vondrona orinasa amin'ny fikarohana siantifika, fanamboarana, ny varotra sy ny debugging. Izahay manaja ny fahalalana, talenta mitelina ary ataovy ao toerana manan-danja. Tsy mandray ny teknolojia avo; hentitra fitiliana ny fampandrosoana tari-dalana, dia lasa maro karazana plastika pamokarana , toy ny plastika board / taratasy milina ,plastika sodina milina ,plastika amin'ny mombamomba milina ,WPC milina ,plastika milina fanodinana , sns
Miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra, mpitantana ankapobeny mandray amin-kitsimpo mba hitsidika namana rehetra!
Raha mijery Shina pe lavaka Grid taratasy pamokarana, vidiny, vola, amidy, na PDF, Aza misalasala mifandray aminay, isika dia iray amin'ireo mpitarika Hollow Grid Sheet Production-dalana, Plastic famokarana-dalana, Grid Sheet Production-dalana, mpanamboatra ary ny mpamatsy.
Previous: 10mm ventin-Polycarbonate Sheet Suppliers
Manaraka: PVC Wood Plastika Door Board Production-dalana,
Hollow Grid Sheet Making Machine
Multi Layer Sheet Production-dalana,
PC Sheet milina
PC Sheet Making Machine
Pe P Pc Hollow Grid Sheet Production-dalana,
Pet Sheet milina
Plastic Sheet Ny fanaovantsika Machine
Pmma Sheet milina
Pmma Sheet Making Machine
Sal Sheet milina
Sal Sheet Making Machine
PVC Sheet Ny fanaovantsika Machine
Single Layer Sheet milina
Single Layer Sheet Production-dalana,
ventin-& Transparent Sheet Production-dalana
Transprent Sheet milina
Transprent Sheet Making Machine
Transprent Sheet Production-dalana,
PVC Sheet Extrudion-dalana,
PVC sy EVA Mono Na Multi Layer Sheet Productio ...
XPS Heat Insulation Foamed Maufacturing Plate-dalana,
PVC Glazed Tile Production-dalana,
APET PETG CPET Mono na Multi Layer Sheet Produc ...
PVC Mono Na Multi Layer Sheet Extrusion-dalana,
No. 15, Guangdong Road, Beiguan orinasa zaridaina, jiaozhou tanàna, Qingdao, Sina